दूर्जेय चेतना: January 2010
चौगिर्दा पर्खाल भित्र मन र झञ्झावात आकाश!!
लामो समय पछि आज एउटा सानो मन र ठूलो आकाश एउटै लाग्न थाल्यो। किन किन समय र मनलाई जोड्दै एउटा नयाँ बिचार आईरह्यो। म गलत हुनसक्छु तर पनि कता कता एक म भित्र अनेकौ भावलाई कुटनपिँधन गर्दै बसिरहेँ, चौगिर्दा पर्खाल भित्र मनलाई जति बाधेर राखे पनि यसको सीमालाई रोक्न कस्ले सक्ने? मनको विष, भावानाको विषलाई कस्ले रोक्न सक्ला? न त यस्को कुनै झारमौरो पाईने न त कुनै झारफुकले नै काम हुने। मात्रै भावलाई पोख्नु र सुनाउनुनै सबै भन्दा उत्तम उपाय हुन सक्छ।
काम र समयको सिमितताले तोबातोबा बनाईरहेको जीवनहरुका हरेक पीडालाई; अन्तर्मनमै अन्तर्निहित दिग्यन्त्रको खोजी सबैको महत्वको विषय हुन सक्छ। तर सोच र ईच्छाहरुको बढिरहने परिताप पनि त पोख्‍नु पर्‍यो। कतै कसै पेन्डुलम भईरहेन यी बिचारहरुको प्रतिबिम्ब बुडिनु पनि त पर्‍यो। कि कसो?? मनलाई आकाश जस्तै ठूलो भनु वा आकाशलाई मन जस्तो सानो, सानो कुन र ठूलो कुन, निकै घोत्लिए यसपटक ।।। लौ है यसपटक यसमै चित्त बुझाउनु पर्ने भयो....
तृप्‍त,दीप्‍त र खुसी मन
भाग्दै, खोज्दै दोडिएको आकाश
आफूभित्र थुप्रै ताराहरु हुदा पनि
अतृप्‍त र अदीप्‍त आकाश!
भावुक, पल्वन र किस्मती मन
गुन्ठिदै, जुजुधौ जस्तै जमेको आकाश,
बिशालताको उपमा लिदै
आफू भित्र थुप्रै आशाहरु हुदा पनि
अशान्त र झञ्झावात आकाश!!
दु:खी पिडित र झारातिराई मन
रुमलिदै, छिमलिदै साघुरिएको आकाश
बिशालताको दम्भ लिदै
आफू भित्रै अथाह पिण्डहरु हुदा पनि
अघोरी र अपाकभोगी आकाश!!!
पापी, अहङ्‍कारी र छिद्रान्वेषी मन
चर्कदै, पोखिदै टुक्रिरहेको आकाश
बिशालताको अहं लिदै
आफूमुनि अथाह वादल हुदा पनि
चुहेत्रो र पोखिरहने आकाश!!!!
वाह!!! मन र आकाश अनि आकाश र मन!!!
Posted by दूर्जेय चेतना at 1:26 PM
Labels: iकबिता, यात्रा
बिहान उठ्ने बित्तिकै !! ३!!
बेलुका अबेरै सुते त्यस दिन। आफन्त सँगको भेटघाट र निकै अबेर सम्मको भलाकुसारीले निद्रा कचमचियको थियो सायद। दु:ख सुखका कुरा केही हदसम्म र केही हदसम्म मेरो विदेश बसाइको गफ सँग सँगै चलिरहेको थियो त्यस रात सबै परिवारजन एक साथ बसेका बेला। आफ्नो प्रोजेक्टको सानो रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने काम बाँकी राखेर हतारमै हिडेकोले त्यस दिन, कलेजबाट प्रोजेक्टको रिपोर्ट बुझाउनु भन्ने ईमेल आएको रहेछ। सुत्ने कोठामै सिरानीको आड लिएरै, काखेलाई काखी च्याप्दै त्यो रिपोर्ट बुझाउदा खेरनै रातीको १:३० बजिसकेको थियो।
बिहान भने बाहिरबाट आईरहेको परिवर्तित प्रकाशका किरणहरुले पर्दाको चरबाटै मेरो आँखाको तन्द्रालाई जगाईदियो। त्यति उज्यालो पनि हैन तर निन्द्रा खुलाउन करिब करिब काफी थियो सायद, त्यसै भयो र म पनि उठे। सुत्‍न मन थियो तर अझै, झ्यालको सानो चरबाट नजानिदो चिसो हावाले कोठानै चिसो पनि बनाईरहेको रहेछ। पर्दा बन्द गर्न म उठे। तर पर्दा बन्द हुनै सकेन। मेरो मस्तिष्कमा एक प्रकारको तरङ्गनै पैदा गरिदियो त्यस बेला, जसबेला मैले पर्दाबाट बाहिर हेरे। मैले के देखेँ र मेरो मनमा कस्तो अनुभव गरे त्यसको कुनै लेखाजोखानै छैन। तर मलाई नजानिदो तबरले स्वर्गको दर्शन भईरहेको अनुभव भयो। म नतमस्तक भईरहेँ र यो समयलाई सधैको लागि स्मरणीय बनाउन मन लाग्यो। कति बनाउन सके कति बनाउन सकिन, तर मेरो पहुँच र समयले साथ दिउन्जेल सम्म मैले त्यो आनन्द लिईरहेँ। मन शान्त हुदै थियो, केही समय पछि माईक्रोबसमा माईक लगाएर माईकिनङ गर्दै आईरहेको ठूलो ठुलो आवाजले भने सबै भताभुङ्ग बनाईदियो।
”भोलीको नेपाल बन्द सफल पारौँ, समयमा संबिधान बनाउन नदिने......... मुर्दावाद.. जिन्दावाद... यस्तै यस्तै.......उफ मैले त सबै बिर्सिएको रहेछु मेरो देशको हालत। जुन कुराको अगाडि मेरो सबै आनन्द गौण भएरहेका छन्।
प्राकृतिक यो सुन्दरताले भरिएको मेरो देश र मेरो ठाउँले मात्र खोजेको केही छ भने त्यो हो, बन्द हटताल र अराजकता माथिको बिजय र स्थिर शान्तिको स्थापना। बिग्रेर नचलेको घडीले त दिनको दुई पटक सही समय दिन्छ भने, कसो हाम्रो देशमा शान्ति र स्थिरता नआउला र? लड्ने र भिड्ने सबै बिषय कसो नसकिएला र एक पटक। मलाई लाग्यो त्यस दिन अझै आनन्द हुने छ मन, तन र त्यसले सृजित सबै विचारहरु पनि। जे होस एकै छिन भए पनि बिर्साईदियो यो सब यी दृष्यहरुले।
मनमा यो गीत भने कता कता याद आईरह्यो “बिहान उठ्ने बित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस यी हातले सधैं सधैं नेपाल लेख्न पाइयोस”!!!! सबैलाई चेतना भया............
Posted by दूर्जेय चेतना at 10:02 PM